Dagaal ka dhacay Magaalada Ceel-Doofaar | maakhir.com
Dagaal ka dhacay Magaalada Ceel-Doofaar
January 29, 2008 in Somalia
CeelDoofaar:- Wararka haatan naga soo gaadhaya magaalada X- Ceel-Daahir ee 90-Km u jirta magaalada Bosaaso ayaa waxa la soo sheegayaa inay caawa fooda is dareen ciidamo taageersan Maamulka Puntland iyo koox dhalinyaro oo deegaankaasi u dhaltay,waxa la soo sheegayaa inay rasaas is waydaarsadeen labadaasi Garab.
Warka ayaa intaasi ku daray in ciidamada Maamulka Puntland ee iyo dhalinyaraasi ay is heleen ay ahaayeen kuwa horay rag deegaanka Sanaag u dhashay jeelasha Puntland u taxaabay kuwaasi oo aan ilaa iyo hataan wax maxkamad ah la soo taagin.
Warka ayaa sheegaya inay ragaasi jeelasha ku jira qaarkood lagu eedeeyay inay log wayn ku lahaayeen Afduubkii loo gaystay labadii Hablood ee u shaqayn jiray Hay”adda MSF Ispain ee dhawaan lagu qafaashay deegaanada Puntland.
Waxa la soo sheegayaa inay rasaas xoogan is waydaarsadeen kuwaasi oo la sheegay in dhanka Ciidamada Puntland laga dilay hal Askari halka mid kalena laga dhaawacay, kuwaasi oo loola soo cararay Cisbitaalada magaalada Bosaaso ku yaala, ma jiraan wax khasaare oo soo gaadhay dhanka kale.
Warka ayaa isna sheegaya inay ciidamo badan oo ka socoda Maamulka Puntland ay ku soo feeleeyihiin dhanka magalaada Ceel Doofaar kuwaasi oo qorshahoodu yahay inay mar labaad Dagaal rogaal cilisa la galaan kooxdii dhanliyarada ahayd ee ay galabta uu dagaalku dhex maray, waxa la cadeeyay inay ciidamaasi badankoondu ay ka soo boqooleen dhanka Magaalada Qardho ee deegaan ahaan uu ka soo jeedo Hogaanka Puntland ee Cade Muuse.
Waxa xusid mudan inay jiraan xooga ciidan oo iyana ka soo kicitimay dhanka Magaalada Dhahar ee Gobolka Sanaag kuwaasi oo la sheegay inay suxulka u dhigayaan Ciidamaasi la sheegay inay tageersan yihiin Maamulka Puntland.
Ilaa haatan ka ma hadalin Maamulka Puntland iska hor imaadkaasi galabta dhacay ka dhacay magaalada Ceel-doofaar.
« Booliska Magaalada Garoowe ayaa qabtay Gaadhi siday Hub
Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan oo ka hadlay Dagaaladii ka dhacay Balad-wayne »